I-Capricorn December 2018 I-Horoscope Yanyanga Zonke - Izindatshana Ze-Horoscope
Main Izindatshana Ze-Horoscope I-Capricorn December 2018 I-Horoscope Yanyanga Zonke
I-Capricorn December 2018 I-Horoscope Yanyanga Zonke
Ngenkathi abanye bevele befinyelela eziphethweni futhi bephupha ngamehlo abo evulekele impumelelo entsha ngoNyaka Omusha, ubonakala usesimweni sokusebenza, esifana neqhawe.
Uzoziqhenya kakhulu ngokuhlela izinto ngomzuzu wokugcina futhi uzokwenza umgomo ukuthi ungashiyi noma yiziphi iziphetho zalo nyaka. Futhi, lesi yisikhathi esihle sokufunda ukwehluka ngokwengeziwe futhi uvumele labo abavala isikhala sabo, njengoba kungebona bonke abantu abazimisele ukukuvumela ubasize, futhi lokhu kuzoba sobala kakhulu kwesinye isikhathi.
Ungase futhi uzithole ukhawula amathemba namaphupho akho, ngomzamo wokugxila kokusebenzisekayo, okungeyona into enhle kakhulu ongayenza.
Novemba 30 uphawu olusha lwe-zodiac
Futhi, nge ISaturn Ukubuyela emuva endlini yakho yesikhombisa, empeleni lesi yisikhathi sokudonsela ukunaka kwakho ebudlelwaneni bakho nokuzama ukuqala kabusha, noma ngabe kukhona nomuntu ofanayo.
Amaphuzu avelele kaDisemba
Ezinye izingqinamba zobungani zingakugcina ushubile ekuqaleni kwenyanga kepha zizoxazululwa kalula ngokuxhumana okuthembekile nokukhululekile. Yebo, nge I-Mercury ekubunjweni kabusha kuze kube ngu-6th, lindela ukungqubuzana okuthile ngaphambi kokuthi lezi zixazululwe kepha ungakhathazeki ngoba konke kuzofanele.
ama-aries ne-scorpio embhedeni
Uzoba ngumhlinzeki omkhulu wezeluleko ngemuva kokusha Inyanga kumaSagittarius angomakhelwane ku-7thkodwa awuzukukwenza lokho okufundisayo, okusho ukuthi kungahle kube khona amashiya aphakanyisiwe ngokuziphatha kwakho.
I- I-Venus I-Saturn sextile debuting ku-12thkuzokwenza uzizwe uthandwa futhi uhlonishwa, noma ngabe usazofuna ukuqinisekiswa okwengeziwe. Lesi yisikhathi esihle sokuqonda okulindelwe ngothandekayo wakho kuwe.
Cishe iNyanga egcwele kuCancer ngomhlaka 22nduzokhetha ukuvuselela amabhethri akho futhi uzokhetha ukuthi uchitha isikhathi sakho nobani. Kepha lokhu akusho ukuthi uzozihlukanisa, kunalokho, empeleni uzokujabulela ukuchitha isikhathi esithile obala.
Izwi lezeluleko phakathi kwama-25thnabangu-28thukulandela umuzwa wakho futhi ungazivumeli uthonywe kakhulu yilokho okushiwo abanye.
Impilo yothando kule nyanga
Nge I-Venus endlini yakho yeshumi nanye, uzoba nokuziphatha kwakho okuhle kunakho konke kule nyanga, ubonakale ungaphazanyiswa yilutho. Izilingo zizokuzungeza futhi lapho uzifuna ngokwengeziwe, kulapho zizokugcina ukhululekile.
Impilo yakho yezenhlalo nayo izokukhetha futhi labo abasebudlelwaneni bangathola ukuthi lokhu kubeka ubunzima ebudlelwaneni, uma bengachithi isikhathi esanele nomuntu abamthandayo.
Abomdabu abangashadile bangafuna ukuqaphela ngokunakekela abakunikezayo noma abakuthola kumngane ngoba kunamathuba athile ento ebonakalayo engenacala engaguqulwa ibe wuthando okunzima ukulwisana nalo.
Indoda ye-gemini nowesifazane we-capricorn embhedeni
Ungahle ufise ukuqaphela nganoma yimaphi amahemuhemu angavela kepha ngaphandle kwalokho, zizwe ukhululekile ukumane ulalele inhliziyo yakho bese uphela unyaka ngokumoyizela okukhulu, okwanelisayo ebusweni bakho.
Izici zomsebenzi ngoDisemba
Sebenzisa le nyanga ukubopha iziphetho ezithile uxoxe nganoma yiziphi izingxoxo okungenzeka ukuthi uzihlehlisile ngoba kungenzeka zingabi khona izikhathi ezinhle zalokhu. Uma ufisa ukuqala kusilayidi esihlanzekile, kuyadingeka impela ukuthi uqale manje.
Futhi, uma ungeneme nganoma yini eyenzekayo emsebenzini, lesi yisikhathi sokukhuluma ngakho bese uzama ukukhiqiza uhlobo oluthile loshintsho. Uzozizwa sengathi usemishini futhi ungahle uthinte nokuthinta impilo yabanye.
Futhi ngenkathi uqala ukwenza okuthile, zinike umzuzwana ukubonga lapho uthole khona futhi uvuse umcabango wakho ngokukhetha okungcono kakhulu esikhathini esizayo.
Ikakhulu phakathi nengxenye yesibili yenyanga uzokulangazelela kakhulu ukuqeda izinto ngokushesha kepha khumbula ngoba nalokhu kungaveza amaphutha.
Novemba 8 ukuhambisana kwesibonakaliso se-zodiac
Maningi amathuba okuthi ukwazi ukuqinisa impilo yakho kuyo yonke le Disemba kodwa udinga ukuqala ngezinyathelo ezincane futhi ungalindeli imiphumela emikhulu ngobusuku obubodwa. Ngasekupheleni kwenyanga ungakwazi ukuguqula amandla akho asanda kutholakala abhekise emisebenzini ekunika injabulo yangempela.
Futhi, kuzodingeka ukuthi ushiye zonke izinkathazo eceleni futhi wamukele ukuthi awukwazi ukulawula konke. Lokhu kuzokunikeza ukuthula kwengqondo okudingeka kakhulu futhi kuzolinganisa imizwa yakho.
Amaviki amabili okuqala angagcina ekucindezele ngaphezu kokulindelekile ngakho-ke futhi kudingeka uqaphele ukuthi udlani ngalesi sikhathi, ukuze ulinganise imiphumela emibi.
Bheka Ukubikezela Okubalulekile kweCapricorn Horoscope 2019
I-Aquarius Sun Pisces Moon: Ubuntu Obungajwayelekile
Ukuhambisana kobungani beSagittarius nePisces
Septhemba 24 ukuhambisana kwesibonakaliso se-zodiac
uhlangothi olubi lwe-pisces man
i-jupiter kumyeni wendlu ye-12
ukuhambisana kwe-taurus man leo woman
isibonakaliso se-zodiac sika-januwari 31
ukufana okuhle kowesifazane wepisces
yini uphawu lwe-zodiac ngoDisemba 26